Sidee wax badan looga qabtaa adoon ku mashquulin sida kuwa faa iidada leh | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | La cusboonaysiiyay 10/07/2018 15:05 | General, Tricks
Qeybtani marwalba waa muhiim marka aad kumbuyuutarka ku qabato howlo. Gaar ahaan haddii aad ku sameyso guriga. Markay tahay nadaafadda, waan ognahay meelaha la nadiifinayo mana danaynno amarka. Sida makaanikada, waxaan ognahay inaad ku qasban tahay inaad hagaajiso hal baabuur ka dibna mid kale. Amarkaas fudud wuxuu noqdaa mid adag markaan haysanno waxyaabo badan oo mashquuliya kombiyuutarka iyo sahlanaanta in laga boodo hal hawl oo loo wareego mid kale, iyada oo aan midna la dhammaystirin. Hawlo badan iyada oo aan lagu mashquulin furitaanka wargeys way adag tahay, laakiin loo baahan yahay.
Cilmi baaris ayaa muujineysa inaan lumineyno ilaa 40 boqolkiiba wax soo saarkeenna haddii aan dhowr wax qabanno isla waqti isku mid ah, maxaa yeelay waxaan sameynaa khaladaad badan, waana ku qaadaneynaa in aan wax qabsanno. Nasiib wanaag, hhalkan waxaa ku yaal farsamooyin fudud oo aan u adeegsan karno inaan ku maareyno waqtigeenna iyo daryeel si hufan.
1 Yaree tabta kombiyuutarka
2 Samee qoraallo faahfaahsan
3 Beddel goobaha shaqada
4 Samee jadwal cayiman
Yaree tabta kombiyuutarka
Ka tag fiidiyowyada istiraatiijiga ah Fortnite iyo sida lagu gaaro guulaha xeeladaha qaarkood. Iska ilow tabta wargeysyada wareejinta ama wararka cusub. Ka saar waxyaalahan oo dhan shabakaddaada, si aad diirada u saarto oo keliya tabta aad u baahan tahay inaad ku dhammayso hawshaada.
Hal fikrad ayaa ah in lagu daro dhammaan shaqooyinkayaga barnaamijyada sida Todoist ama Wunderlust. Waxaan ku keydineynaa qodobbada Jeebka ama kuwa loogu jecel yahay biraawsarka (si aan mar dambe u aqrinno). Oo markaa, waxaannu dhawri doonnaa oo keliya tabta na xiisaynaysa inaannu shaqada ku dhammaysanno. Haddii, kiiskaaga, aadan awoodin inaad iska xirto tabtaada, waxaa jira qalab qaar. Kordhinta aan ku talinayno waxay noqon doontaa 'Hawl-wadeenada'. Fudud, la yaab leh fudud oo wax ku ool ah. Sheeg waxaad rabto inaad diirada saarto oo aad baabiiso waxyaabaha kale ee kaa mashquulin kara. Waa bilow.
Samee qoraallo faahfaahsan
Ha dhayalsan muhiimadda haysashada qoraalo qoraal ah caadooyinkaaga iyo howlaha sugida ah inaad fuliso. In kastoo waxaa jira qalab sida Evernote-ka caanka ah o OneNote xaaladdan waxaan ku talin lahaa in la isticmaalo wax la taaban karo. Sida qoraallada dhejiska leh ama ajandaha. Sidaas awgeed, sidan ayaan waxoogaa ku iloobi karnaa mashquulinta ay 'curiyeyaal badan' nagu sababi karaan kombuyuutarka. Jaleec deg deg ah jadwalkayaga oo aan helno aan yeelno.
Mararka qaarkood waxaan u maleyneynaa inaan haysanno xusuus wanaagsan oo aan loo baahnayn in la qoro, laakiin maahan inaad yeelato xusuus wanaagsan ama xun. Mararka qaarkood, macnaha guud ee is beddelka u dhexeeya hawl iyo hawl kale ayaa kaa jeedin kara oo kaa horjoogsan kara inaad xusuusato wixii ay ahayd inaad sameyso. Haysashada qoraalku waxay qaadataa cadaadiska isku dayga inaad wax xasuusato waxayna sahlaysaa in wax laga beddelo. fiirsashada hal hawl ilaa tan xigta.
Beddel goobaha shaqada
Markaad ka shaqeyneyso guriga, way fududahay inaad ku degto kursiga fadhiga oo noo sheeg "halkan waxaan ka qaban doonaa hawsha xigta", weedhaas lafteedu waa been. Markaan degno, waxaan lumineynaa waqtiga waqtiga oo aan mashquulno. Taasi waa sababta ka shaqeynta guriga ay naga dhigeyso mid adag. Inaad u doorato goobo shaqo oo gaar ah hawl kasta waxay kaa caawin kartaa inaad nidaam gaadho. Hadaad hayso hawl aad wacdo 'Jaale'Waxaan ku qaban doonnaa howshan "qolka 1"; Haddii howshaadu tahay 'Cagaar' Waxaan ku sameyn doonaa "qolka 3".
Haddii ay dhacdo inaad ka shaqeyso xafiiska waxaad ku sameyn kartaa aamusnaan meelo. Ama shaqada guriga ee 'huruud' ah ee xafiiska ama 'cagaarka' shaqada guriga ee maktabadda. Waa inaad ku doorataa hadba duruufaha kugu habboon shaqooyinka kala duwan.
Samee jadwal cayiman
Halkii aad isku dayi lahayd inaad waxbadan ka qabato markasta, meel dhig waqtiyo aad diirada saarto hawlo gaar ah: saacad aad ku qortid bartaas, afar si aad u dhamayso sawiradaas, iwm. Farsamadan waxaa lagu magacaabi karaa 'Farsamada Pomodoro': Uqeybso waqtiga 25 daqiiqadood qaybood tusaale ahaan, shan daqiiqo oo nasasho ah ayaa udhaxeysa. Marka wareegga la dhammeeyo, waxaad ururin kartaa nasasho dheer (20 daqiiqo).
Guud ahaan, 25 daqiiqo waa wakhti ku filan in hawl lagu hormaro, shanta daqiiqadood ee nasashaduna way gaaban tahay oo ma faro-gelinayso fikradeyda shaqada. Waxaa laga yaabaa inaad doorbideyso waqti dheeri ah oo ah waqtiga shaqada iyo nasasho yar. Tijaabi fursadaha oo hel laxanka adiga kuu shaqeynaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo mashquuliyo iyada oo aan lagu mashquulin sida faa'iidooyinka
Sida loogu mashquuliyo sida faa'iidooyinka iyada oo aan lagaa mashquulin
Jawaab Emilio Castelló Ambou